भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा मेरो उहाँलाई प्रेमपत्र - News Portal from Nepal
प्रदेश-१प्रदेश-२वाग्मती प्रदेशगण्डकी प्रदेशप्रदेश-५कर्णाली प्रदेशसुदूरपश्चिम प्रदेश
# kamana news
# kamana media
# भ्यालेन्टाइन डे
भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा मेरो उहाँलाई प्रेमपत्र
प्रकाशित मिति : शुक्र, फाल्गुन २, २०७६
पुजा पराजुली वाग्ले ।
प्रेमको अस्तित्व र भावना मैले त्यो दिन त्यस क्षणदेखि बोध गर्न थाले, जब मैले हजुरलाई भेटें । अनि हजुर मेरो जिन्दगीमा आउनु भयो । त्यसैले त थाहा पाए प्रेम नाम होइन बोध वा अनुभूति हो रहेछ । त्यसैले हजुरलाई सम्झन मेरो दिलको ढोकामा कुनै विशेष दिन र अवसर आइराख्नु पर्दैन । हजुर त सास बनेर म मा भरिनु भएको छ ।
खै ! थाहा छैन कहाँबाट सुरु गरूँ । जिन्दगीको कति लामो समय बितिसकेछ प्रिय हजुरसँग साथ छुटेको । सोच्छु, थाहा छैन यो सात वर्ष कसरी बित्यो उही घर, उही कोठा, उही बिस्तारा, सबै खालीखाली लाग्छन् हजुरबिना ।
कल्पना गर्छु, कस्तो हुन्थ्यो होला अहिले हजुर साथमा भइदिएको भए ! अरुको जस्तै मेरो संसार पनि हराभरा हुन्थ्यो होला । मेरो पनि हातमा हात राखेर कदममा कदम मिलाउने, मेरो खुसीमा हाँसीदिने, मेरो दुःखमा रोइदिने, कोही मेरो आफ्नो, मेरो मात्र हुन्थ्यो होला । हिजो जस्तै लाग्छ प्रिय ! जुन बेला हाम्रो भर्खर भर्खर बिहे भएको थियो । ती दिनहरू धेरै सम्झन्छु म ।
हजुरलाई पनि त याद आउँदो हो, बिहेपछि पोखरा, मनकामना घुमेर फर्किदा मैले बाटोमा चटपटे किनेर खाँदै थिएँ । मलाई देखेर हजुर छक्कै पर्नु भएको थियो । बाटोमा खुला ठाउँमा बेच्न राखेको खानु हुँदैन । फोहर हुन्छ, बिरामी भइन्छ । अबदेखि यसरी कहिल्यै नखानु ल भनेर सम्झाएको आजसम्म पनि बिर्सिएको छैन मैले ।
प्रेम कति अद्भूत र अतुलनीय चिज हुँदो रहेछ; भर्खरै थाहा पाउँदै थिए । छोराछोरी जन्मिए । बिस्तारै माया बाँडियो । बाँडिएर जाँदा पनि प्रेमको कमी कहिल्यै महसुस भएन । पर्याप्त थियो हजुरको माया मलाई । संसार हजुरभित्र अडेको थियो मेरो ।
तर नियति कति छिटै निष्ठूर भइदियो । त्यो ठूलो बज्रपात हाम्रो जीवनमा आयो अनि मेरो सबै लिएर गयो । तर अन्तिम अवस्थामा राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा हजुरलाई रुममा रेष्ट गर्न छाेडेर म अस्पतालमा गई बेड बुक गरी किमाेथेरापीकाे सबै औषधी ल्याएर हजुरलाई फोन गरेर बाेलाएकाे एक घण्टा बितिसक्दा पनि हजुर आउनु भएन । डाक्टरले हजुरलाई ‘जल्दी बुलाओ’ भनेर भनिरहेका थिए । मैले तपाईंलाई कति फोन गरें तर उठाउनु भएन । थाहा छ, हजुरलाई म कति आत्तिएकी थिए त्यो बेला । पछि लगभग डेढ घण्टापछि हजुर बल्ल आइपुग्नु भयो । पुरै पसिनाले निथ्रुक्क भिजेर, थकित हुँदै ! हातमा रहेको प्लास्टिकको झोलाभित्र केही थियो । तपाईं बिस्तारै मेरो सामु आउनु भयो । हातमा भएको झोला मेरो हातमा राखिदिँदै मायालु स्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘तिमीलाई चट्पटे मनपर्छ नि ! आउँदा हाट बजारमा चट्पटे राखेको देखे तिमीलाई ल्याउन खोज्दा ढिला भयो । ’म हेरिरहे हजुरको मुहार । सम्झे उतिबेला बाटोमा खुल्ला राखेको खानु हुँदैन भनेर मलाई सम्झाएको ।
एक पललाई त यस्तो लाग्यो नियतिलाई नै बदली दिउँ । कति छटपटी भयो कता जाउँ, के गरौँ । हजुरका प्राणको भिख माग्न कता, कोसँग झोली फौलाउँ । कति निरिह थिए म । हजुरको माया पोखिदैँ थियो ।
सोमबारको त्यो दिन अझै याद छ मलाई जुन दिन हजुरकै आयु भगवानसँग माग्न म व्रत बसेकी थिए । त्यो बेलामा हजुरले मेरो साथ छोडेर सदा सदाको लागि टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लगभग तय नै थियो । तर, यो मन मान्न तयार थिएन । किमोले काम गरिरहेको थिएन । रिपोर्टहरू दिन प्रतिदिन खस्किँदै थियो । म बुझ्छु हजुरले थोरै समयमा मलाई धेरै खुसीहरू दिन चाहनुहुन्थ्यो । हजुरको म प्रतिको माया प्रेम देखेर मलाई धेरै गाह्रो हुन थालेको थियो । वासरुम छिरे, निकै बेर रोए । रोइरहे ।
उफ् ! छोडौँ भो ती दुखद क्षणको सम्झना । सम्झदा पनि गाह्रो हुन्छ मलाई ।
सुन्नुस् न– हजुरलाई थाहा छैन होला, अचेल त भ्यालेन्टाइन हप्ताभरि खुलेरै माया साटासाट गर्ने चलन व्यापक भएको छ नि । पहिला जस्तो कहाँ हो र ! अहिले जताततै भ्यालेन्टाइन डे को मात्र चर्चा चलिरहेको छ । प्रेमिल जोडीहरू खुलेरै आफ्नो मायाप्रेम साटासाट गरिरहेको देख्छु ।
म पनि हजुरको माया, त्याग र समर्पणको सम्झनामा हराइरहेकी छु । कल्पिन्छु, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला हजुर सँगै भइदिएको भए । संसार नै रंगीन हुन्थ्यो होला हगि !
तर अहिले त मेरो संसार नै शून्य लाग्छ हजुर बिना । म के गरूँ प्रिय ! कसरी आफ्नो मन बुझाउ ?
सोच्छु अहिलेको यो भ्यालेन्टाइन डे मा हजुर साथमै हुनभएको भए……..।
हजुरको लागि भनेर म सारी लगाएर चिटिक्क परेर बस्थे । कुनै विशेष गिफ्ट किन्थे, सुटुक्क हामी कतै बाहिर जान्थ्यौँ बच्चाहरू लिएर । हजुरको हातमा रातो गुलाफको फूल हुन्थ्यो । जुन मलाई दिँदै फेरि अर्को सरप्राइज गिफ्ट निकाल्दै मेरो अगाडि बढाएर भन्नु हुन्थ्यो होला ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे !’ म पनि आफूले किनेको सरप्राइज गिफ्ट दिँदै सानो स्वरमा भन्थे ‘आई लव यु’
नानीहरू पनि ताली बजाउँदै खुसी हुन्थे होलान् । ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे’ भन्दै । आहा ! कस्तो रमाइलो ।
सपनामै सही !
प्लिज आइदिनुस् न प्रिय फेरि मेरो यो जीवनमा,
अरुको जस्तै बनाउन हाम्रो पनि भ्यालेन्टाइन डे ।
रक्षा मन्त्री पोखरेल विवादित सीमा कालापानी अवलोकन गर्न जाँदै
नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी अधिकृत बनेका खनाल कारबाहीमा
के होला पूर्व सभामुख महराको मुद्दा, आज फैसला हुँदै
सामूहिक बलात्कारको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस माग्ने असईविरुद्ध ६० लाख बिगाे माग
महिला हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा सिमित
ऐतिहासिक लमजुङ दरबारमा प्रहरी पोष्ट
सरकारले बिल्कुलै काम गर्न सकेन : कांग्रेस
‘गाँजा खेती आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ’
महरामाथिको मुद्दामा सोमबार फैसला हुने
‘सहकारीकाे सम्पत्ति शुुद्धीकरण आजकाे आवश्यकता हाे’
© 2016 all right reserved to kamananews.com | Site By : SobizTrend Technology